vendredi, 05 février 2016 10:30
Bevohokan’ny dadatoany : Notereny hanala zaza tamin’ny vola 50.000 Ariary
Ankizivavy tsy ampy taona no noteren’ny rain-janany hanala ny zaza ao an-kibony tamin’ny alalan’ny vola 50.000 Ariary tao amin’ny Fokontany Antsirabe Sambava. Notambazan’ny lehilahy iray, 30 taona eo, hiray ara-nofo aminy ity tovovavy ity, tamin’ny alalan’ny vola 30.000 Ariary. Bevohoka ilay tovovavy ary nananika ny faha efa-bolana ny kibony tamin’iny janoary iny. Tamin’io indrindra no naneren’ilay rangahy azy mba hanala io zaza io mba tsy ho fantatry ny ray aman-dreniny satria mbola mianatra rahateo ilay tovovavy, hiatrika fanadinana BEPC amin’ity taom-pianarana ity.
jeudi, 04 février 2016 22:09
Mahajamba : Tena diso fanantenana ny mponina
Raha ny fanampiana nampanantenain'ny mpitondra no nadrasana dia maty mosary tao ny mponina tao Mahajamba, izay fefiky ny tondra-drano taorian’ny orana nijojo tao anatin’ny tapabolana. Ny vary 25 taonina nampanantenain’ny fanjakana ho avy dia mbola tsy tonga hatramin'izao, ary raha ny nambaran'ny lehiben’ny Distrikan’i Mahajanga II dia 5 taonina aloha no ho tonga atsy ho atsy ; ny ambiny moa angamba dia naman'ny tsy misy ?
Soamahamanina Miarinarivo Itasy
jeudi, 04 février 2016 21:57
Soamahamanina – Itasy : Nidina an-dalambe sady nilanja sorabaventy ny mponina
Manohitra ny nanomezan’ny fanjakana Rajaonarimampianina orinasa sinoa Jiuxing Mines SARL fahazoan-dalana hitrandraka volamena ao Soamahamanina PK 66, Disitrikan’i Miarinarivo, faritra Itasy, ny mponina ao an-toerana. Nidina an-dalambe, manamorona ny lalam-pirenena voalohany sady nilanja sorabaventy teo anoloan’ny Tranompokonolona izy ireo androany ho fanoherana izany.
jeudi, 04 février 2016 13:50
Kaominina Ambohitrimanjaka : Fasana 3 nisy namaky
Efa tsy kely lalana intsony ny ratsy, fasana 3 no nisy namaky tao amin'ny kaominina Ambohitrimanjaka. Ny fasana iray, razana teo amin'ny 40 teo no tsy hita, ny iray koa lasa daholo ny razana rehetra tao, fa ny fantelony kosa tsy nakan'ny mpanao ratsy fa nakorontany fotsiny. Gina ireo fianakaviana naheno ny vaovao ratsy. Omaly tamin'ny 1 ora tolak'andro teo no nihazo ny fasana i Ramanasinjatomanana Ainasolo saika amonjy fandevenana no nahita ny fasana nisokatra ka niantso fianakaviana sy fokonolona. Ity farany no nampandre ireo tompon'ny fasana manodidina vaky, ary tamin'ny maraina teo no tonga teny an-toerana ny fianakaviana rehetra.
jeudi, 04 février 2016 12:41
Boeny : Mitaraina ireo Ben’ny tanàna mahakasika ny mpitandro ny filaminana
Tonga niarahaba ny Lehiben’ny Faritra Boeny Saïd Ahamad Jaffar mivady nahatratra ny taona 2016 tao amin’ny Lapan’ny Faritra eny amin’ny La Corniche ny Sabotsy 30 janoary 2016 ireo Ben’ny tanàna 27 avy amin’ny Distrikan’I Mahajanga II, Marovoay, Ambatoboeny, Soalala ary Mitsinjo. Nitondra fitarainana tamin’ny alàlan’ny Filohan’ny Fikambanan’ny Ben’ny Tanàna izy ireo izay sady Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ambonivohitr’Ambatoboeny, Rakotonandrasana Jean Valérien noho ny afitsoky ny mpitandro filaminana sasany, izay manao tsinotsinona ny naman’izy ireo any amin’ny toerana iadidiny avy.
mardi, 02 février 2016 16:07
Sambava : Misandoka ho mpitsabo, ny salama indray no marary
Rangahy iray nitonona ho mpitsabo no namoa-tsampona tao Sambava. Ny alahady heriny, raha tonga tamina tokantrano iray tao Antaimby izy ka nahita renim-pianakaviana iray izay tena mararin’ny tosi-dra. Izaho hoy izy no manana traikefa amin’ity aretinao ity, hoy ilay rangahy, koa raha mifanaraka isika dia efatra andro no hijanonako eto hanasitranana anao.
lundi, 01 février 2016 12:13
Antsirabe : Fiaran’ny Jirama nandratra mpitondra scooter
Nandona olona tao afovoan-tanan’Antsirabe, io maraina io tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany teo, ny fiaran’ny Jirama Antsirabe. Avy nanatitra mpianatra ilay fiaran’ny Jirama no nirimorimo fandeha ary nivily tampoka tsy nandefa jiro famantarana.
lundi, 01 février 2016 10:11
Photo: Sobika Farafangana
Farafangana : Nizarana karatra maintso ireo zokiolona
Mahatsapa ireo zokiolona ao Farafangana, izay mivondrona amin’ny fikambanan'ny zokiolona mavitrika, fa osaosa ny fampiharana ny lalàna izay miaro azy ireo. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo ny mba hampiharana an-tsakany sy an-davany ny lalàna, satria hanampy azy ireo eo amin'ny sehatry ny fitsaboana, fitaterana... mba hahazo fihenam-bidy.
dimanche, 31 janvier 2016 18:15
Fandriampahalemana any SAVA
« Voafehy » hoy ny Polisy, « maro ny tokony harenina » hoy ny Senatera. Nifampiharahaba tratry ny taona 2016, tao amin’ny Hotel Melrose, omaly ny fianakaviam-ben’ny Polisy ao Sambava tarihin’ny Commissaire Joseph Saramba. Nandritra izany no nanaovana jery todika ny taona 2015 izay nafampana tamin’ireo tsy fandriam-palemana, nisian’ny fanafihana mitam-basy, ny « kidnapping ». Na izany aza hoy Commissaire Joseph Saramba dia voafehy izy ireny, noho ny fiaraha-miasa tamin’ny vahoaka sy ny mpitondra tao anivon’ny faritra SAVA, na dia tsy 100% aza.
mardi, 26 janvier 2016 13:53
Vakinankaratra : Novoriana maika ireo tompon’andraikitry ny Zandarimaria
Namory maika ireo tompon’andraikitry ny Zandarimaria ao Vakinankaratra ny Lietina-kolonely Ramiaramanana Rabelasy, Lehiben’ny Vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria Vakinankaratra ny marainan’ny Talata 26 Janoary 2016. Ny anton’ny fivoriana dia fampitana ny toromariky ny kaomandin’ny Zadarimariam-pirenena ka ireo Tompon’andraikitra rehetra amin’ny kompanian’ny Mandoto, Ambatolampy, ary Antsirabe no novoriana hampitana izany. Ny toromarika dia ny fanatanterahana ny asa mba ahazoana vokatra tsaratsara kokoa hoan’ity taona 2016 ity. Voakasika amin’izany ny momba ny fampiharana ny fifampifehezana eo anivon’ny zandary ahafahana manantanterana ny asa hafa. Eo koa ny Ady amin’ny halatr’omby na an-tsaha na an-tanana. Ny fametrahana ny adian-tafika hiady amin’ny dahalo izay tsy mahakasika an’i Vakinakaratra aloha izay.